Hagaha Xiliga Thanksgivingka ee Cunnooyinka Lugaha - Cuntooyinka Shaagagga
Tilmaamaha Xilliga Thanksgiving-ka ee Cunnooyinka Lugaha
Laga soo bilaabo Walk to End Hunger on Thanksgiving ilaa macluumaadka ku saabsan gaarsiinta cuntada fasaxa, waa kuwan hagahaaga wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato oo ku saabsan Cuntooyinka Lugaha Lugta inta lagu jiro xilliga Thanksgiving.
Macluumaadka iskaa wax u qabso ee Thanksgiving
Sida ugu xiisaha badan - iyo tan ugu saaxiibtinimada badan qoyska - ee dib loogu celiyo Thanksgiving-kan ayaa ah ka qaybqaadashada Soco si Aad u Dhamayso Gaajada. Dhacdadan qoys ee kaamil ah waxay dhaqso u noqon kartaa dhaqan cusub oo Thanksgiving ah! Socodku wuxuu dhacaa subaxii Thanksgiving-ka ee Mall of America. Waxa ku yaal goobo loo qoondeeyey “Fun Zones” oo ku dhex yaal suuqa weyn, sidaa darteed waxaad ka heli doontaa wax kaa madadaalin kara gees kasta. Qaar ka mid ah howlaha dhacaya inta lagu jiro Socodka waxaa ka mid ah koorso carqalad ah, rinjiyeynta wajiga, qol sawir leh, buufinno iyo farshaxanno caday, iyo waxqabadyo ay ka mid yihiin isku dubaridka xirmooyinka cuntada ee loogu talagalay dadka u baahan cunnadan Thanksgiving-ka. Socodku sidoo kale waa fursad weyn oo looga hadlo oo lagala kulmo muhiimada ay leedahay in dadka kale laga caawiyo qoyskaaga. Waa habka ugu wanaagsan ee wax loo bixiyo ka hor intaadan mahad celin! Dhammaan lacagta la soo ururiyey waxay u socotaa Cuntada Lugaha Lugta, waad iska diiwaan gelin kartaa inaad ku socotid Cuntada Lugaha halkan. Haddii aadan sameyn karin, tixgeli ugu deeqaya metroo Meals on Wheels team.
Inta badan barnaamijyada xubnaheennu waxay bixiyaan cunnooyinka mahadnaqa ee dib loogu kululeeyo Maalinta Thanksgiving inta lagu gudajiro maalmaha horukacaya Thanksgiving. Haddii aad jeceshahay inaad bilowdo inaad cunnada gaarsiiso madaxa bogga tabaruca boggayaga internetka ..
Macluumaadka ku saabsan helitaanka cuntada ee Thanksgiving
Kuwa hada cuntada qaata
Cunnooyinka Thanksgiving ee Wheels waa urur kaligiis ah oo diiradda saaraya gaar ahaan bixinta cunnooyinka diiran ee Thanksgiving oo ay ku jiraan turkey, labbis, baradhada, iyo dhammaan waxyaabaha kale ee wanaagsan. Adeegani waa u diyaar dhammaan dadka u baahan - maahan kaliya waayeelka. Haddii aad xiiseyneyso inaad ku hesho Cunnada Thanksgiving ee Wheels waxaad kala xiriiri kartaa 651-699-5404 wakhti kasta wixii ka dambeeya Nofeembar 1.
Nofeembar 8, 2018